राजस्व कार्यालय भरतपुरको कर संकलन लक्ष्य ४३ अर्ब
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ४३ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त कार्यालयलाई गत आवभन्दा करीब रू. १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको हो । कार्यालयले गत आवमा रू. ३० अर्ब ६४ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो ।
कार्यालयले गत आवमा आयकरतर्फ २ अर्ब २१ करोड, बहाल करतर्फ ६ करोड २४ लाख, ब्याज करतर्फ १० करोड ६८ लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख र अन्तःशुल्कतर्फ २६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै, सो अवधिमा कार्याालयले शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ रू. १ करोड २७ लाख कर उठाएको थियो ।
कार्यालयले तुलनात्मक रूपमा कर संकलन लक्ष्य बढी पाए पनि लक्षित कर संकलन जानकारी दिएको छ । जिल्लामा अन्य करको तुलनामा अन्तःशुल्कको कर संकलन बढी रहेकोले यो लक्ष्य पूरा हुने आकलन गरिएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी धनीश्वर अर्याल चितवन र नवलपरासीमा मद्यपान र सूर्तीजन्य उद्योगहरू बढी रहेकोले कर संकलनको आधार बलियो रहेको बताउँछन् ।
‘मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको कर पनि बढेको छ, यससम्बन्धी उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने । लक्ष्य अनुसारको कर संकलनको लागि कार्यालयले, बक्यौता उठाउने, करको दायरा बढाउने, जरीवाना गर्ने र राजस्व चुहाबट रोक्ने लगायत कर सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम गरिने बताएको छ ।
माछापालन व्यवसायमा पनि लकडाउनको असर[२०७६ चैत, २२]
विदुर नगरपालिकाद्वारा ५०० मजदूरलाई राहत वितरण[२०७६ चैत, २२]
मौरीपालक किसानको पीडा : हामी घरभित्र छौं, मौरी जंगल भागे[२०७६ चैत, २२]
१० हजार उपचार खर्च तथा एम्बुलेन्स भाडा तिरिदिँदै शैलुङ[२०७६ चैत, २१]
मौरीपालक किसानको पीडा : हामी घरभित्र छौं, मौरी जंगल भागे [२०७६ चैत, २१]